ICG: Afar arrimood oo la gudboon Farmaajo si uu Imaaraadka ula heshiiyo - Caasimada Online
Home Warar ICG: Afar arrimood oo la gudboon Farmaajo si uu Imaaraadka ula heshiiyo
ICG: Afar arrimood oo la gudboon Farmaajo si uu Imaaraadka ula heshiiyo
Ururka xasaradaha caalamiga ayaa ka digaya in muranka kharaar ee u dhexeeya dawladaha khaliijka Carabta uu khatar ku yahay oo uu wiiqayo daganaanshaha Soomaaliya.
Hadalka ICG ayaa ku soo beegmaya sanadguuradii koobaad ee ka soo wareegtay markii uu billaamay muranka Khaliijka.
Bishii June ee sannadkii hore waxaa dhacay wax aysan dad badan filanynayn, taas oo ahayd in saddex dal oo ka mid ah dalalka ku bahoobay Khaliijka Carabta ee hodanka ah ay xiriirkii dublamaasiyadeed u jaraan dalka Qadar.
La hadal Imaaraadka
Waxaana sidoo kale la sheegay loogu baaqay saraakiisha sare ee dowladda inay qaboojiyaan hadallada ka dhanka ah Imaaraatka.
Mucaaraadka yaan loo caga jugleynin
In Somaliland lala hadlo